गुगलद्वारा ह्वावेईको मोबाइललाई आफ्नो सेवामा पहुँच सीमित पारेपछि कस्ता असर पर्लान् ? | Rajmarga
गुगलद्वारा ह्वावेईको मोबाइललाई आफ्नो सेवामा पहुँच सीमित पारेपछि कस्ता असर पर्लान् ?
गुगलले चिनियाँ मोबाइल कम्पनी ह्वावेईसँगको व्यापार सीमित पार्दै ह्वावेईलाई उसका मोबाइल सेवाहरूबाट वञ्चित गरिदिएको बताएको छ। यसको अर्थ ह्वावेईले अब गुगलको प्राविधिक सहायता पाउनेछैन र उसका नयाँ स्मार्टफोनहरूले लोकप्रिय गुगल एप तथा सेवामा पहुँच पाउने छैनन्।
गुगलका एक प्रवक्ताले बीबीसीसँग कुरा गर्दै अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वीकार गर्ने क्रममा गुगल रहेको बताए। रोयटर्स समाचार संस्थाका अनुसार नयाँ ह्वावेई स्मार्टफोनहरू गुगलका केही सेवाबाट वञ्चित हुनेछन्।
उक्त समाचार संस्थाका अनुसार ह्वावेईका नयाँ स्मार्टफोनहरूले गुगलको एप स्टोर तथा उसको जीमेल जस्ता सेवामा अब पहुँच पाउने छैनन्।
ह्वावेईले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। रोयटर्सले नाम नखुलाइएको सूत्रलाई उद्धृत गर्दै कस्ता कस्ता सेवाबाट ह्वावेईलाई वञ्चित गराइने भन्ने बारे गुगल अझै छलफलरत छ। तर ह्वावेईले अझैपनि ओपन सोर्स लाइसेन्समार्फत उपलब्ध एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भने प्रयोग गर्न सक्नेछ।
बुधवार ट्रम्प प्रशासनले ह्वावेईलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गर्दै अनुमति विना उसलाई कुनै प्रविधि बेच्न अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि रोक लगाएको थियो।
“गुगलको तर्फबाट प्रस्ट वक्तव्य नआएसम्म के कस्ता प्रभाव पर्नेछन् भनेर विस्तृत बताउन गाह्रो छ,” सीसीएस इनसाइट कन्सल्टेन्सीका बेन वुडले बताए। “तर यदि रोयटर्सको विवरण साँचो हो भने ह्वावेईको उपभोक्ता व्यापारमा त्यसको ठूलै असर हुनेछ,” उनले भने।
विश्वभर कैयौँ सरकारहरूले सुरक्षा चिन्ता दर्साउँदै नौलो फाइभजी मोबाइल सञ्जाल विकासमा ह्वावेईका उपकरण प्रयोग गर्न रोक लगाएका छन्। हालसम्म ब्रिटेनले ह्वावेईलाई औपचारिक प्रतिबन्ध लगाइसकेको छैन।
“ह्वावेईले उसको आफ्नै एप ग्यालरी तथा अन्य सफ्टवेअर विकास गर्न परिश्रम गरिरहेको छ। आफ्नो भाग्य आफैँ निर्धारण गर्न उसले यी सब चीज गरिरहेको मान्न कठिन छैन,” वुडले भने।
ह्वावेईलाई अल्पकालीन क्षति?
बीबीसीका प्रविधि सम्पादक लियो केलियोन भन्छन् अल्पकालका निम्ति ह्वावेईलाई गुगलको निर्णयले क्षति पुग्नेछ।
उनी भन्छन् – गुगलको प्लेस्टोरमा पहुँच नभएको स्मार्टफोन किन्न उपभोक्ताहरू हिच्किचाउने छन्।
तर दीर्घकालमा भने स्मार्टफोन विक्रेताहरूलाई गुगलको अपरेटिङ सिस्टमको भरपर्दो विकल्प निर्माण गर्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न यसले बाध्य बनाउन सक्छ।
ह्वावेईको हकमा उसले अमेरिकी प्रविधिबाट आफू वञ्चित हुन सक्ने स्थितिको आकलन गरिसकेको जस्तो देखिन्छ। उसका स्मार्टफोन आफ्नै स्वामित्व भएका प्रोसेसरबाट सञ्चालित हुँदैछन् तथा गत वर्ष सो कम्पनीका एक वरिष्ठ अधिकारीले छुट्टै अपरेटिङ सिस्टम बनाएको बताएका थिए।
तर जे होस् यो निर्णयले ह्वावेईको सामसुङलाई जितेर सन् २०२० मा नम्बर एक मोबाइल कम्पनी बन्ने लक्ष्यमा भने धक्का पुग्नेछ।
अमेरिकी नीतिको असर
अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले ह्वावेईले चिनियाँ सरकारको निम्ति अमेरिकी सञ्जालमाथि जासुसी गर्न सक्ने चिन्ताकामाझ उसलाई कालो सूचीमा राखेको केही दिनपश्चात् गुगलको यस्तो निर्णय आएको छ।
नयाँ नियम अनुसार अमेरिकी कम्पनीहरूले ह्वावेईलाई प्रविधि हस्तान्तरण वा विक्री गर्न अब अनुमति लिनुपर्नेछ। चिनियाँ कम्पनीले ट्रम्प प्रशासनको चिन्तालाई निराधार भन्दै आफू बेइजिङ सरकारबाट स्वतन्त्र रहेको बताउँदै आएको छ।
Previous post: कपिल शर्माको हालसम्मकै ठूलो सफलता, बर्सिन्छन् हर्षका आँशु
Next post: बजार भाऊ उकालो लागेको लाग्यै सरकारी अनुगमन कमजोर
हेर्ने हो त सूर्यग्रहण ? यसरी गर्नुस अवलोकन
पक्राउ परेका ‘विप्लव’ समुहका नेताहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने तयारी
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज
आवश्यक परेमा संसद् अवरुद्ध गर्ने ओली समूहको तयारी
आजको राशिफल (२०७७ फागुन २३ गते)